Chakra Curie: Cilad-bixinta Kadib-Rakibaadda | Laga soo bilaabo Linux
Chakra Curie: Dhibaataynta ka dib rakibaadda
1 Xaaladda Hadda ee Chakra Linux
Xaaladda Hadda ee Chakra Linux
Hagaag, maadaama aanan ku fiicneyn sameynta "news" qoraal kooban, waxa aan kuu sheegi doono ayaa ah Chakra Wuxuu la soo maray dhibaatooyin kala duwan, kuwaas oo uu hadda ka soo kabanayo. Dabagal wixii dhacayay, waxaan kaaga tagayaa taxane maqaalo ah, oo ay daabaceen Khatar (Qoraa reer Caledonia ah xubinna ka ah Linux Chakra).
Waxaad arki kartaa xiriiriyeyaasha Halkan (Malcer wuxuu hadda dib ula shaqeynayaa Chakra, wuxuuna qeyb ka yahay kooxda: D), Halkan y Halkan.
Kuwa aqoonta u leh Ingiriisiga, waad arki kartaa liisaska, gaar ahaan duntaani kaas oo lagu maareeyay shilkii serverka weyn Chakra.
Chakra Linux ayaa hadda deggan www.chakraos.org, halkaas oo waxyaabo kale aad ka hubin karto xaaladda dhammaan adeegyada Chakra. Laga bilaabo maanta, waxay umuuqataa sidan:
Qoraal shaqsi ahaaneed, waxaan dhihi doonaa dhawaanahan waxaan isku arkay aniga oo aad ugu lug leh (aad baan ugu jiraa liiska xD) Linux Chakra. Asal ahaan maxaa yeelay waa distro aan waligey jeclaa. Nasiib darrose, siyaasaddooda la xiriirta daaweynta codsiyada GTK, waxyaabo yaryar sida aan awoodin rakibidda appmenu-gtk si loo gaaro is-dhexgal qumman oo nooca desktop-ka ah ee aan isticmaalo iyo kuwa kale, marwalba waan ku dhammaanayay.
Chakra Waxaa loo bixiyaa qaybsi ahaan isla marka aad dhammayso rakibidda gabi ahaanba waa lacag la'aan GTK ka dibna dhaqaajinaya repo dheeraad ah o ururinta baakadahaaga (ama iyada oo loo marayo baakadaha shaqsiga ama iyada oo loo marayo a Keydinta Deegaanka) waa suurtagal in la rakibo labada codsi GTK sida qt. Anigu shakhsi ahaan waan jeclahay fikradda ah inay i siiyaan saldhig bilaash ah GTK, Diirada saaray KDE iyo wixii markaa aan sameyn karo wax kasta oo aan ku rabaa nidaamka.
Si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca ayaa ah in iso hadda jira ee Chakra (Curie) Waxaa laga soo gudbay dhammaan dhaqdhaqaaqa serverka ee la sameeyay iyo, marka lagu daro, waxay soo bandhigeysaa dhowr cayayaanka dhibta leh (horeyba waa loo soo sheegay, marka iso xiga ee Chakra waxay umuuqataa inay runti wanaagsanaan doonto), marka dhammaantiin Linux Chakra kuwaas oo doonaya inay ka bilaabaan distoorkan, halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo xaliyo dhibaatooyinkan, si loogu raaxaysto Chakra Curie ilaa 100%.
Waxaan horey u soo sheegay cayayaankaas, wayna ahaan doonaan la xaliyay in iso soo socda ee Linux Chakra
Isla marka ay dhammeeyaan rakibaadda Chakra Curie Waxa ugu horreeya ee ay ogaan doonaan ayaa ah haddii ay isku dayaan inay galaan, adigoon gujin magacaaga isticmaale shaashadda galitaanka, si kasta oo ay u geliyaan lambarka sirta ah, waxay heli doonaan a baadi.
Sida loo galo (si ku meel gaar ah, hoosta ayaa xalka ah):
Marka hore waa inaad gujisaa isticmaale kahor intaadan galin lambarka sirta ah.
Xaaladdayda gaarka ah, tani waxay sababtay dhibaatooyin ogolaansho oo la yaab leh (sida muuqata xitaa waxay saameyn ku yeelatay furayaashii kor u qaaday oo hoos u dhigay dhalaalka). Waxaan u maleynayaa inay taasi sabab u ahayd ka dib markaan hagaajiyay, dhammaan arrimaha ogolaanshaha iyo waxyaabaha layaabka leh waxay bilaabeen inay si dhammaystiran u shaqeeyaan. The xal waxay ka kooban tahay abuuritaanka galka ku jira iso Curie looma abuurin asal ahaan oo ku meelee rukhsadaha saxda ah:
1) Abuurista galka KDM
2) U qoondee milkiilaha iyo kooxda galka
3) Waxaan dib u bilaabaynaa mashiinka (kaliya faa iido malahan in dib login)
4) Waxaan fureynaa krunner (alt + f2), waxaan qoreynaa: «kdm» oo waxaan dooranay «Access screen», waxaan aadnaa tabka "Users" iyo "User Images" waxaan dooranayna isticmaaleheena, ka dibna waxaan u xilsaaraynaa sawir, oo guji "codso", waxay na weydiin doontaa furaha ereyga, ka dibna aqbalno
Diyaar. Tan waxaan ku xallinaynaa arrinta KDM, iyo arrinta rukhsadda.
Hadda, waxaad ogaan doontaa markii aad rabto inaad cusboonaysiiso nidaamka ...
… Hel qaladka soo socda:
Ciladan waxaa sabab u ah socdaalka serverka. Waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan wax ka bedelno kuweenna liiska muraayadda in lagu daro serverka aad ku talinayso www.chakraos.org:
Iyo khadadka koowaad, waxaan kudarnaa adeegaha lagu taliyay
xariiq lagu daro: "Server = http://rsync.chakraos.org/$repo/x86_64"
haray liiska muraayadda sida soo socota:
Hadda, waxaan sii wadeynaa inaan cusbooneysiino nidaamkayaga:
Sidaad arki karto, waxaan horeyba uheynay lacag urursi iyo socodsiin, waxaan dhihi doonaa "haa" waxkasta oo naweydiiya (waxaad arki doontaa inay tiraahdo waxaa jira noocyo maxali ah oo dhawaanahan ka badan meelaha lagu keydiyo, taasi waa sababta oo ah mid ka mid ah cayayaanka ayaa ah Curie wuxuu keenayaa xirmooyin taxane ah oo aan weli ku jirin meelaha xasilloon, maxaa yeelay waa la tijaabinayaa)
Hagaag, tan, waxay horey u yeelan karaan a Chakra Curie, si buuxda u shaqeynaya, salaan! 😀
Ugu dambeyntii waxaan kuu daayay xiriiriyeyaal muhiim ah:
Golaha Isbaanishka Bulshada
Madasha Rasmiga ah
Madasha ku taal DesdeLinux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Chakra Curie: Dhibaataynta ka dib rakibaadda
Kaalin weyn, Tete, waa lagama maarmaan ilaa inta iso cusub oo leh xiriiriyeyaasha la saxay uusan soo bixin.
Better lama oran karo, ee maxaad wax kale u dhaheysaa. Waxaan ku biirayaa faallada.
Waxaan la kulmay cilladda galitaanka ee Chakra Fritz
Sidee xiiso leh ... OS ima aqoonsan yahay XD
Malcer wuxuu ku soo laabtay Kooxda Chakra taasi waa mid wanaagsan ... Distoor weyn oo soo martay dhibaatooyin sida ugu badan laakiin haatan waxaan ku dareemayaa Kaos wanaagsan. Waad ku mahadsantahay maqaalka yaqaana kan ugu fiican waxaanan kugu dhiiri galinayaa inaad ansixiso ...
Qof kasta oo isticmaalaya maqalka dijitaalka ah ee ka baxsan qalabka 'Chakra'?
Garan maayo waxaad ujeedo, haa codka maqalka hdmi, waan sameeyaa
Nasiib darrose tani waxay sii socotaa inay dhacdo ISO 2014.05-kii ugu dambeeyay «Descartes»
wax walba ka waran? xD, waxaan joogaa Descartes goobtana waa la xaliyay, meelaha lagu kaydiyo wali waxaa jira dhibaatooyin qaar waqti ka waqti, 2 usbuuc ma aanan la kulmin dhibaatooyin repo, waxay umuuqataa inay ka fikirayeen inay badalaan martigalinta, maxaa yeelay waxay leedahay wax aad looga xumaado xaaladan xD
Been jiif shalay kadib layaabkaygii ahaa inaan qashinku si sax ah loo rakibin (qalliinka ssytem lama helin), ka dib markii laga soo booday hdd markii la galayay cayayaanka ayaa u muuqda
Ku xayeysiis Xayeysiiska leh Squid iyo Easylist